Kooxo hubaysan oo Muqdisho ku diley weriye Soomaaliyeed – Radio Daljir
Kooxo hubaysan oo Muqdisho ku diley weriye Soomaaliyeed
Seteembar 21, 2012 10:08 b 0
Muqdosho Sep 21-2012-Allaha u naxariistee waxaa magaalada Muqdisho maanta lagu dilay Wariye Xasan Yuusuf Absuge oo ka howlgalyey Radio Maanta oo ka mid ah idaacadaha ka shaqeeya magaalada Muqdisho.
Wariyaha ayaa waxaa toogtay sida ay Radio Daljir u sheegeen saaxiibadiisa shaqada kooxo bastoolado ku hubeysan oo iyagu madaxa ka toogtay xili uu marayey meel ku dhow isgoyska Baar Ayaan oo ay xarunta Idaacadda uu ka howlgallo ku taalo.
Allaha u naxariistee Xasan Yuusuf Absuge ayaa waxaa uu mar ka mid ahaa wariyeyaashii ka shaqeynayey ?Muqdisho intii Dowladihii KMGka ahaa dalka ay ka jireen waxaana dilkiisa uu imaanaya waxyar kadib markii ilaa Seddex wariye ay shalay kooxda Al-Shabaab qarax ku dishay.
Al-shabaab oo iska fogaysay masuuliyada qaraxyadii ka dhacay dhacay guriga hooyooyinka ee Moqdisho.
Qurbajoogta Puntland ee Yurub oo ku dhawaaqay urur siyaasadeed Cusub